9 matipi ekuwedzera kutengesa muCommerce | ECommerce nhau
9 matipi ekuwedzera kutengesa muCommerce
Ehezve, mumasocial network pane niche yevatengi vane simba kwazvo uye saka saka iwe unofanirwa kushandisa kubva ikozvino. Ndosaka tichikurudzira kuti iwe usvetukire munzvimbo dzakasiyana dzemagariro uye pakupedzisira woona kuti ndeapi aunonamatira uye ndeapi anokushandira.
Nekuti hazvisi zvese zvakafanana uye nekuda kweichi chikonzero iwe unofanirwa kusarudza iwo manetwork anonyatsokodzera chimiro chechitoro chako kana bhizimusi repamhepo. Mune ino pfungwa, kune akawanda maitiro ayo akasiyana masocial network anogona kukuunzira iwe kubva kune iyi mhando nzira.
Muchirevo chechinyorwa ichi, chiito chisingaitwe nekukasira. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe uchazviona sezvaunoenda, zvishoma nezvishoma. Iko kwaunogona kusvika kune yakakura nhamba yevashandisi kana vatengi nechinangwa chakananga chekuwedzera kutengesa muCommerce. Iwe zvakare uchave unonzwisisa kubva panguva iyoyo zvichienda uye kusvika padanho rekuti iwe unokwanisa kuendesa meseji yako kukona yekupedzisira yepasi. Iko hakuna miganhu iyo inogona kudzikamisa zviito zvako uye ichi kukosha kwaunogona kutora mukana kubva ikozvino.
1 Gadzira zvako zvemukati
2 Vaka kuvimbika kune vatengi vako
3 Kuvandudza kuchengetedzwa mukutenga
4 Tora mukana wemagariro
5 Gadzira blog ine zvemhando yepamusoro zvemukati
6 Ipa kukura kukuru kune yako bhizinesi
7 Gadzira netiweki ine simba yevamwe vanobatana navo
Gadzira zvako zvemukati
Iyi ndeimwe yemazano akakosheswa ekuwedzera kutengesa muCommerce. Muzviitiko izvi, nekuti unogona kuratidza kubva zvino zvichienda mberi kuti iwe uri nyanzvi yechokwadi mubhizinesi rako rezvebhizimusi ne kutsanangurwa kwemavara, mavhidhiyo kana zvimwe zviridzwa kupi kuendesa zvirimo pane peji rako rewebhu. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri muchinzvimbo chekuonekwa zvakanyanya uye kutarisana nemakwikwi, mune ndechipi chimwe chezvinangwa zvaunofanirwa kuita kuburikidza neiyi zano mukushambadzira kwedhijitari.
Paunenge uri kune rumwe rutivi, iwe unofanirwa zvakare kufunga nezvazvo kubva zvino zvichienda izvo chokwadi chekugadzira chako zvemukati chinogona kuburitsa kuti kuvimbika kwevatengi vako kana vashandisi kwakakura kudarika pakutanga. Iine kuoneka mune bhizinesi mutsetse iyo inotungamira pamusoro pezvimwe zvinhu zvehunyanzvi hunhu. Imwe yemipiro mikuru pakusarudza iyi chaiyo yekutengesa nzira inogara mune yekuti mupiro wakanaka kwazvo wekupa zviwanikwa kubhizinesi rako. Neye mupiro wezvinokurudzirwa zvitsva kukwezva huwandu hukuru hwevatengi kubva zvino zvichienda mberi.
Vaka kuvimbika kune vatengi vako
Ndiyo nzira yechinyakare iyo yaunzwa kunze kwemakore mazhinji uye iine mhinduro dzinogutsa dzezvinodiwa nekambani yedigital. Mupfungwa iyi, kana kutengesa kwepamhepo kukamira, tinowanzo funga kuti hwaro hwevatengi hauchisiri sezvataida kubva pakutanga. Nekudaro, iwe unofanirwa kufunga kuti zviri nyore kwazvo kuchengetedza uye kugutsa vatengi vanotoziva yako brand pane kutanga kubva pakutanga.
Neichi chikonzero, zvakakosha kuti iwe ugadzire ako ese marongero kuitira kuti varipo vatengi kana vashandisi vafare nemasevhisi aunopa. Nechinangwa chekuti havaendi kumakwikwi kubva panguva iyoyo zvichienda mberi. Wakatarisana nemamiriro ezvinhu aya, hauzove nesarudzo asi kuendesa nzira dzese dzekudzichengeta nekudzichengeta dzichivimba nekambani yako yepamhepo. Mhedzisiro yacho ichave inogutsa kwazvo kubva kune ese maonero maonero. Inokurudzira, kana zvichibvira, kusimudzira kutengwa kwezvigadzirwa, masevhisi kana zvinhu zvinotengeswa kubva kuchitoro chepamhepo.
Kuvandudza kuchengetedzwa mukutenga
Ichi chiwanikwa chisingambokundikana mukirasi ino yezvinangwa. Mune ino mamiriro, iwe unogona kutora iyo CES (Yakachengeteka Magetsi Commerce) system, inova imwe nzira yekuwedzera iyo inosanganisira kuchengetedza makadhi kuitira kuti kana kutenga kuchiitwa online, yega password inokumbirwa yekutenga pamhepo. Iyo sisitimu inozounza kuvimba kwakanyanya pakati pevashandisi kana vatengi pavanogadzira kutenga kwavo muchitoro kana bhizinesi repamhepo.
Nepo kune rimwe divi, iwe unofanirwa kutora matanho kuitira kuti kubhadhara kweInternet kuve nekuchengetedza kukuru kune vese vatengi. Zvese zvine chekuita nekubhadharwa kunoitwa kune echikwereti kana echikwereti makadhi pamwe nemagetsi masystem uye kunyangwe mamwe marongero Kwete zvisina maturo, kuzvigadzirisa pamwe nekuchengetedzeka kukuru kubva zvino zvichienda mberi kunobatsira iwe kuzvichengetedza zvakanyanya uye nekudaro kutengesa kweako zvigadzirwa kana masevhisi zvichawedzera. Kufanana nekusimbiswa panguva yakakodzera pawebhusaiti yechitoro chepamhepo chaunomiririra.
Tora mukana wemagariro
Mupfungwa iyi, iwe unofanirwa kuyeuka kuti Facebook, Pinterest, Twitter, YouTube uye Reddit ndiwo masocial network ane akanyanya kutengesa kutendeuka kwemabhizimusi e-commerce, zvinoenderana niche yako uye nerudzi rwevateereri.
Kurudzira kudyidzana mukati mekambani. Iyi poindi yakanangana nekutengesa zvemagetsi iyo zvakare ine poindi yekutengesa mumugwagwa. Izvo zvakakosha kuti iwe ushandise zvirongwa zvekutora vatengi vako kubva kunze kwenyika kuenda kune ako masocial network. Kana iwe ukabudirira, iwe uchave uine akawanda mavhoti kuitira kuti ivo ivo pamwe nemagariro avo vashanyire webhusaiti yako nechitoro chako chepamhepo.
Iyo sarudzo inoshanda kwazvo yekupa kuoneka kumutsara wakasarudzwa webhizimusi kuburikidza nekutengesa zvigadzirwa paInternet. Mupfungwa iyi, hazvigone kukanganwika kuti iwe unogona kupa odhiyo uye ekuona zvinhu kuti ugadzirise kutengeswa kwezvako zvigadzirwa, masevhisi kana zvinhu. Seye sosi yekuzvitsauranisa kubva kumakwikwi panguva iyo mutemo wekupa uye wekuda uchinyatsogadzirisa hukama nevatengi kana vashandisi.
Gadzira blog ine zvemhando yepamusoro zvemukati
Hapana mubvunzo kuti iyo blog ndiyo nzira yakanakisa yekuita zviitiko muchitoro chako chepamhepo maererano neinjini yekutsvaga. Iwe haugone kutarisira kuti traffic inouya kune yako webhusaiti chete kubva pasocial network kana kubva kune ako akatsiga mapeji. Kana zvisiri, pane kudaro, inogona kukwidziridzwa nebhurogu inopa zvemhando yepamusoro zvemukati uye neinobatsira kwazvo midhiya yekuona. Zvekuti pakupedzisira zvinobatsira izvo zvido zvevashandisi kana vatengi vekambani iri kutaurwa.
Tichiri kune rimwe divi, kana isu hatikwanise kukanganwa mune ino mamiriro chokwadi kuti kana iwe usina bhurogu yehunhu huno panguva ino, zvirokwazvo kuti kubva zvino zvichienda mberi uchave nekumira kwakanyanya kuomarara neSocial Media. Kuti iwe uite ichi chakakosha chiito, iwe unofanirwa kuziva kuti angangoita ese mapuratifomu ekugadzira online chitoro chinokutendera iwe kuve neblog uye kugona kugadzira iri zano mune yedhijitari yekushambadzira chikamu.
Ipa kukura kukuru kune yako bhizinesi
Imwe yetipi yakakosha matipi ekuwedzera kutengesa kweako zvigadzirwa kana masevhisi muCommerce zvinoenderana nekupa kuonekera zvakanyanya kune iyo kambani inotarisira kushambadza iyi yekutengesa maitiro. Mupfungwa iyi, yakanaka SEO kumisikidza ndeimwe yeakanakisa maturusi aunogona kushandisa kubva zvino zvichienda mberi. Mupfungwa yekuti zvakakosha kuti iwe utarise kuti kumisikidza kwako kuri kwechisimba mumainjini ekutsvaga kwakakosha, asi usingafungidzirwe nekushandisa kwayo. Zvisinei, usakanganwa kuti kukosha uku kunodzikira zvishoma nezvishoma sezvo kushandiswa kwenzvimbo dzekudyidzana kuri kuwedzera
Chero nzira, kuita zano rebhizinesi iri kunogona kukubatsira iwe kuzadzisa zvimwe zvezvinangwa zvaunazvo pamberi pako mukuvandudza kwechitoro chako chepamhepo kana commerce. Kuburikidza nezviito zvinotevera zvatiri kuzokuratidza pazasi:
Vaka kuvimbika kwevatengi nekuvapa zvemhando yepamusoro zvemukati, kwete muzvinyorwa chete asi nerutsigiro rwekuteerera.
Ratidza ruzhinji chiratidzo chekutengesa kuti uribatanidze nezvigadzirwa kana masevhisi aunotengesa.
Zviparadzanise kubva pamakwikwi panguva iyo hunyanzvi iri iro rinowedzerwa kukosha raunofanirwa kugara uchifunga nezvako pakutengesa zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinhu.
Iva nemakwikwi zvakanyanya muchikamu chako uye upe yakawedzera kukosha pamusoro pemamwe makambani edhijitari.
Iri izano rekutengesa iro rinonyanya kubatsira kusimudzira zvigadzirwa zvako zvese, kusanganisira izvo zvitsva zvauri kuvhura pamusika.
Gadzira netiweki ine simba yevamwe vanobatana navo
Kushanda muboka pasina mubvunzo kunogona kukubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako zviripo kubva ikozvino. Kusvika padanho rekuti iwe uchave uri munzvimbo iri nani yekuwana yekutengesa nzira uye vatengi iwe usina nguva yekuzviongorora pachako. Zvinogoneka kuti iwe unogona kuwedzera huwandu hwekutengesa uye zvakare hwevatengi kana vashandisi. Nekugadzirisa kwezvese zviwanikwa zvaunoshandisa izvozvi. Icho chokwadi chekugadzira online chitoro chakabatanidzwa kune rako bhizinesi parizvino iri nyore maitiro aunogona kuita uchishandisa anokwanisa software.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » 9 matipi ekuwedzera kutengesa muCommerce
Nzira yekutenga online zvakachengeteka?